Samachar Batika || News from Nepal » साहित्यकार सुमन “श्री” भित्र हराउँदा”
साहित्यकार सुमन “श्री” भित्र हराउँदा”
तस्बिरमा समिक्षक : गंगा बानिया
सर्जक सुमन केसी २०४७ साल जेठ १० गते बाबा कर्णबहादुर केसी र आमा सरस्वती केसीका कोखबाट जलजला ४ पर्वतमा जन्मिएकाहुन् । सानैदेखि साहित्यमा रुचि राख्ने सुमन मोफसलमा कलम चलाउँदा चलाउँदै विभिन्न सञ्चार माध्यममा आबद्ध हुँदै गर्दा हाल उनीपोखरामा नव प्रतिभाका रुपमा उदयमान भईरहेका छन् । यिनै नव प्रतिभा सुमनको पहिलो कृति हो “श्री” ।
“श्री” नामक मुक्तक सङ्ग्रहनेपाली साहित्य क्षेत्रमा निकै उर्वर साहित्यको रुपमा देखिएको छ । उक्त कृति प्रकाशन लगत्तै पोखरादेखि भाइ सुमनले मलाई उक्त कृतिउपहार स्वरुप पठाइएको भोलिपल्टैदेखि मनमा निकै जिज्ञासा र कौतुहलताका साथ व्यस्त समयलाई पनि किनारा लगाउँदै जब उनको योकृति पढ्न बसेँ तब मैले हृदयदेखि नै भाइ सुमनप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्दै उनलाई अझै उचाईमा पुराएर झलमल्ल पार्नेछ भन्ने पूर्णआर्शिवाद दिदै यस सङ्ग्रहभित्र पसेँ । जहाँ १०५ वटा मुक्तकहरु समावेश भएका रहेछन् ।
अतहः मनमनै एटा बलियो सम्भावनायुक्त भविष्यको उदय भएको महसुस गर्दै “श्री”बाट सुमनलाई हेर्ने मौका पाएँ । उक्त मुक्तसङ्ग्रहको बाहिरी शीर्षक नै प्रष्टिएको छ कि “श्री” भन्नासाथ नयाँ कामको थालनी, शुभकार्य तथा सुकर्म । शब्दकोषीय अर्थ विद्या, बुद्धि, रुप, गुण र सम्पन्नता आदिको शक्ति वा पूर्णताद्वारा अल्झिने शोभा, कान्ति वा दिप्तीलाई मानिन्छ । उनले “श्री” शीर्षकका लागिसर्वशक्ति मान्दै जीवनका अपूर्णतालाई शक्तिको उज्यालोले पूर्णता दिँदै भन्छन् कि
ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण शक्तिहरुको नाम हो “श्री”
धर्म, ज्ञान, सम्पत्तिलाई अर्थ दिने काम हो “श्री”
धैर्य, क्षमा, विश्वास, स्वास्थ्य र परोपकार जस्ता
हाम्रो जीवनको मूख्य देवगुण गुरु राम हो “श्री”
वास्तवमा साहित्य अनुरागीका लागि आनन्द अनुभूति रसानुभूति मात्र नभई ज्ञानानुभूतिका लागि पनि आवश्यक मानिएको पाईन्छ ।
तसर्थः जब म उनको कृतिभित्र पहिलो खण्डमा प्रवेश गरेँ ततपश्चात् यसभित्र युवा वयका प्रेमिल र रोमाञ्चक भावहरु मुक्तकमाछताछुल्ल पोखिएको पाएँ । जीवन भोगाईका युवा पुस्तामा माया प्रेमका भावहरु मुक्तकारका मुक्त कण्ठले यसरी बोलेका हुन कि ः
मन परेर नाम सोधेँ तर तिमी गयौ तर्किएर
केटाको जातै खराब हो भन्दी रह्यौ झर्किएर ।
तर त्यो तिम्रो क्या राम्रो इसारा थियो मलाई
पर पुगेर मीठो मुस्कान देखि थियौ फर्किएर ।।
जीवनका रङ्गहरु तिमीलाई भरिदिन सक्छु
नयाँ ढङ्गले जीवन रेखा नि कोरिदिन सक्छु ।
तिमी हुन्छ मात्र भन संसारका सबै खुसीहरु
एकै पलमा तिम्रो सामु जोडिदिन सक्छु ।।
वस्तुतः माया प्रेमका अगाडि युवा पुस्ता जस्तो सुकै कठोर परिस्थीतिमा पनि पार गर्न सक्छ भन्ने मुक्तककारको अन्तरमनले बोलिरहेकोपाईन्छ । मानव जीवनमा प्रेममा अल्झिएर आफ्नो गन्तव्य विहिन यात्रामा हिडिरहेको हुन्छु भन्दै मुक्तक मार्फत बोलिरहेको पाईन्छ ।
खै ! आज त नजिकको मान्छे पनि टाढा भएको छ
गन्तव्यमा पुग्न नसकिने आधी भाडा भएको छु ।
तर आजकल ऊ सम्बन्धलाई कमजोर पार्दैछ
तैपनि ऊ प्रति मेरो माया झन् गाडा भएको छ ।।
मुक्तकहरु पढदै जादा सबै मुक्तकहरु रुवाई शैलीमा रचना भएको पाएँ । मानव जीवनमा जीउने क्रममा समय चक्रले कहिले घुमाउँदै कुनतहमा लैजान्छ त कहिले कहाँ पुराउछ,जहाँ वास्तबिकताको पहिचान दिनु मुक्तकको चोटिलो जवाफ हो । यसै क्रममा मुक्त कण्ठबाटभनिरहेका हुन् कि ः
न त हामी साना छौं नत यो बालापन हो
बैंश आउने हेर सानु घरजम गरीखान हो ।
कति भनुँ तिमीलाई उमेर हाम्रो भईसक्यो
आज आ’को म त तिमीलाई भगाई लान हो ।।
दोधारमा पर्दै तिमी कति औला पड्काउँछ्यौ र
माया गर्ने मान्छेलाई किन यति तड्पाउँछ्यौ र ?
दिन गए महिना गए हुन्छ हुन्न केही पत्तो छैन
यसरी नै कहिलेसम्म पाक्या फललाई अड्काउँछ्यौ र ?
मुक्तकको रसपान गर्दै जाँदा जब म दोस्रो खण्डमा आएँ यहाँ प्रेमप्रणय भाव मात्र नभै राजनैतिक विकृति विसङ्गतितर्फ पनि चोटीलोव्यङ्ग्य प्रहार गरेको पाएँ । मुक्तककारका अन्तरह्यदयबाट बोलिरहेका हुन कि ः
पहाडमा पहिरो चल्दा तराईमा बाढी आउँदा
महङ्गी नि उर्लि आयो मधेशतिर बन्द छाउँदा ।
केन्द्रमा मीठो भाषण गर्दै नेताजी आफूलाई बचाउँछन्
जनताप्रति चासै छैन खै ? जति पनि पद पाउँदा ।।
साहित्यकार समाजको वास्तबिक हेर्ने ऐनाको प्रतिक मानिन्छ, उनले भनेका छन्ः
कुरिती र विसङ्गति हटाउने स्वच्छ छवि हुँ म
खराब र अन्धकारमा प्रकाश छर्ने रवि हुँ म ।
झुपडी र थोत्रो लुगाबाटै विश्व चिहाएर पनि
सबको दीलमा नयाँ विचार रोपिदिने कवि हुँ म ।।
साहित्यको अनुराग लिँदै जाँदा मानव जीवनमा जन्म, मृत्यु पनि एक अपरिहार्य तत्व हो । परन्तु मानवले यो नस्विकारी हुँदैन, यो यथार्थहो भन्ने सन्दर्भमा मुक्त कण्ठ उघारेर स्वर घन्काएका छन् ।
मलाई हृदय देखि कत्तिपनि डर छैन
निश्चित छ योबाट बच्ने कुनै आधार छैन ।
एकदिन आउनेको हुन्छ भन्ने सम्झनुस् एकदिन
जानेको पनि हुन्छु यसमा कुनै दोधार छैन ।।
भन्छन् सबले चिन्ता नै चिताको बाटो हो
हुन पनि अन्त्यमा सबै खरानी र माटो हो ।
अलिकति चिन्ता, चिन्ता होईन चिन्तन हो
बुझ्नु पर्ने हामीले सबैले यही मूख्य पाटो हो ।।
तसर्थ, मुक्तक पढ्दा कता कति हामी नेपाली वा हाम्रो मुलुक बहु धार्मिक र बहु सांस्कृतिकभित्र पीडित छ ताकी हामी आत्मैदेखि जुनभगवान पुजन गरेपनि आखिर सबैको पुकारा कालान्तरमा एउटै परमेश्वर हुन् । जो ईश्वरमा भेदभाव हुँदैन भनि मुक्त कण्ठबाट यी बाँकीपरेका स्वरहरु गुञ्जाएका हुन् ।
हिन्दू मुस्लिम बौद्ध इसाई र अन्य कति कति धर्म
असललाई आफूमा धारण गरौं यही हो मुख्य कर्म ।
एकलाई छोडी अर्कोमा लाग्छौ ईश्वरमा भेद किन ?
नाम मात्र अनेक हो झोली भर्ने एकै हो बुझौन मर्म ।।
त्यस्तै अर्कोतर्फ साहित्यिकार रचनाका नाममा यत्रतत्र छरिएका जति पनि कृतिहरु सर्बत्र निस्किएका छन् । तिनलाई चुनौतिपूर्ण ढङ्गलेअन्तरमनबाट चोटिलो व्यङ्ग्य गर्दै बोलिरहेको पाईन्छ किः
सुन्नुस् !, सुन्नुस् ! सबैले कुरा अल्ली खास हो
बजारमा सस्तो कमसल दरमा मुक्तकको रास हो ।
नत भाव छ न त कुनै तुक नै छ यस्तो पनि के मुक्तक
यो त पढ्ने र सुन्ने दुवैलाई समयको नास हो ।।
निष्कर्षमा भन्नु पर्दा युवालाई सर्जक सुमनको अन्तर चेतनमनले जे बोलेका हुन् यी सबै सत्य र तीतो यथार्थ हुन् । उनी बोलेका भावहरुयुवा चित्त ढङ्गले ओतप्रोतझै यथार्थमा परिणत भएको पाईन्छ र भन्न सकिन्छ कि उनको साहित्यमा प्रस्थान गर्ने पहिलो कृतिका रुपमाआएको “श्री” मुक्तक सङ्ग्रह अवको उनको साहित्यिक यात्रा र प्रस्थानलाई अगाडि बढ्न अझै थप प्रेरणा मिल्ने एक अंश बन्ने छ ।
साहित्यमा अनुरागी युवा सर्जक सुमनको आफैप्रतिको विश्वास पनि हो । साहित्यमा साधनारत रहँदै अझै उनको लामो यात्रा तथालक्षपूर्ण यात्राले पाठक समूहको मन जित्न सफल बन्नेछ वा बन्न सकोस् भन्ने अभिलाषा राख्न सकिन्छ ।
अतहः पेसाले उनी सञ्चारकर्मी भएपनि साहित्यिक विधामा उत्तिकै सक्रिय रहन सक्ने एक कुशल व्यक्तित्व सुमनका आगामी दिनहरुमापनि मुक्तकहरु प्रवाहपूर्ण, अविरल गतिमा बढिरहुन र एक दर्विलो र सशक्त मुक्तककारको रुपमा पुगुन भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा, साहित्यमा सञ्चारका सफल संवाहक भाइ सुमन केसीलाई साहित्यका विभिन्न आयाममा देख्न सकियोस् भन्ने ओजपूर्णअभिलाषाका साथ सफलताको हार्दिक शुभकामना नमन गर्न चाहन्छु ।
प्रकाशित मिति २४ फाल्गुन २०७६, शनिबार १२:४२